That's so good, right?: 10 things that can deflate your Erection
10 things that can deflate your Erection ယောက်ျားတွေကို ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ အချက် (၁ဝ) ချက်
1. Depression စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း
2. Alcohol အရက်
3. Medications ဆေးဝါး
ED ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ရောဂါကု ဆေးဝါးတွေရှိတယ်။ သွေးတိုးကျဆေး၊ အနာသက်သာဆေး၊ စိတ်ကျဆေး၊ Oral contraceptives ကိုယ်ဝန်တားဆေးတချို့၊ Chemotherapy ကင်ဆာဆေး၊ Anti-HIV drugs ဆေးများ၊ Finasteride ဆေး၊ Synthetic progesterone-medroxyprogesterone ဆေး၊ နောက်ပြီး Street drugs မူးယစ်ဆေးတွေထဲက Amphetamines, Cocaine နဲ့ Marijuana တွေကနေလဲ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
4. Stress စိတ်-ရုပ် ဖိစီးမှု
5. Anger ဒေါသ
6. Anxiety စိုးရိမ်စိတ်
7. Middle-Aged Spread အဝလွန်ခြင်း
8. Low Libido စိတ်နည်းနေခြင်း
9. Your Health ကျန်းမာရေး
အာရုံကြော၊ ကြွက်သား၊ သွေးလှည့်ပတ်မှုတွေ ကောင်းနေရမယ်။ ဆီးချို၊ သွေးတိုး၊ သွေးကြောကျဉ်း၊ ဆီးအကျိတ် ရောဂါတွေကနေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ဒီရောဂါအတွက် ဆေးတွေကနေလဲ ဖြစ်နိုင်တာ တချို့ရှိတယ်။
10. How to Solve Erection Problems ဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်မလဲ
ကိုယ့်လိင်ကိစ္စ အားနည်းနေတာကို ဆရာဝန်ပြောဘို့ ရှက်တတ်ကြတာ ပြောမထွက်တာ လူအများစုဖြစ်တယ်။ သူငယ်ချင်းကို တိုင်ပင်တာလဲ နည်းလှတယ်။ စာတွေဖတ်ချင်ပေမဲ့ ကောင်းတာ ဘယ်မှာရှာရမလဲ မသိဘူး။ ကြော်ညာကောင်းတာကို အဟုတ်ထင်ကြတာလဲ မနည်းဘူး။